Qormo Isugu Jirta Diin, Dhaqan, Suugaan, Taariikh Iyo Aqoon Guud Qalinka: Siciid Maxamuud Gahayr | FooreNews
Home Aragtida Dadweynaha Qormo Isugu Jirta Diin, Dhaqan, Suugaan, Taariikh Iyo Aqoon Guud Qalinka: Siciid Maxamuud Gahayr
Qormo Isugu Jirta Diin, Dhaqan, Suugaan, Taariikh Iyo Aqoon Guud Qalinka: Siciid Maxamuud Gahayr
FoorenewsAug 01, 2015Aragtida Dadweynaha0
. Ma ogtahay in markii koowaad ee la tijaabiyo Nukliyeerka lagu dhuftay laba magaalo oo uu Jabaanku lahaa kuwaas oo la kala odhan jirey Hiroshiima iyo Nagasaaki, ganistaas nukliyeekuna ay Jabbaan ku khasabtay in uu is dhiibo, sidaadna uu ku afjarmay dagaalkii 2aad ee adduunku.
• Ma ogtahay in figta Ifris, oo ah figta buureed ee adduunka ugu dheer loogu magacdaray, ninkii koowaad ee ay u suutogashay in uu figtaas gaadho, isla markaana uu cabiro dhererka figta, ninkaasna la odhan jirey George Everest.
• Ma ogtahay in aad maalintiiba indho la’dahay illaa 30 daqiiqadood !!!!, ha moodin wax kale, 30kaas daqiiqadood waa ilbidhiqsiyada aad indhaha kolba isku qabanaysid.
• Ma ogtahay in Sir Isac Newton uu yahay Saynisyahnkii daahfuray cufisjiidadka dhulka, Xisaabta kalkulaska, iyo waliba saddex xeer oo khuseeya socodka walxaha, xeerarkaas oo loo bixiyay xeerarka socodka walxaha ee Newton.
• Ma ogtahay in Cismaan Binu Cafaan lagu naanaysi jirey “Du nuureyn”, ama kii labada nuur lahaa, waxaana taas loogu bixiyay waxa uu nasiib u helay in uu guursado laba hablood oo uu Nabi Maxamed SCW, uu dhalay.
• Ma ogtahay in uu Macaad binu Jabal ahaa Saxaabigii, u cilmi badnaa asxaabta rasuulka mark laga hadlayo xalaasha iyo xaaraanta ama culuumta fiqhiga, sidaas na waxa cadeeyay Nabi Maxamed SCW.
• Ma ogtahay in uu ilmada indhaheena ku jiro Enzyme loo yaqaano Lysozyme kaas oo ilaaliya indhaha, baabiiyana xayawaanada ili ma aragtayga ah ee indhaha gala, xayawaanadaas oo ay ka mid yihiin bakteeriyada iyo fayrasku.
• Ma ogtahay in ururka Qaramada Midoobay lagu dhisay magaalada Sanfransisco oo ku taalla Maraykanka, sanadkii 1945.
• Ma ogtahay in ninkii u horeeyay ee dastuur sameeyaa uu haa nin Giriig ah oo magaciisa la odhan jirey Xamuraabi.
• Ma ogtahay in ay dhamaan walxaha cirka laga soo tuuraa, ay dhulka ku soo wada gaadhi lahaayeen waqti isku mid ah hadii aanu jirin Caabbiga hawadu, walxuhu ama dhagaxaan ha ahaadeen ama waraaqo ha noqdeenbee.
• Ma ogtahay in ururkii Sahnuuniyada adduunka ee ujaeedadiisu ahayd in ay Yuhuudu qabsato Falastiin, lagu aasaasay magaalada Balse ee wadanka Switzerland sannadkii 1897, waxaana mabda’aas taageeray 1917kii wasiirkii arrimaha dibada ee Ingiriiska Balfour kaas oo ahaa Yuhuudi haysta dhalashada Ingiriiska.
• Ma ogtahay in Nabiyada afar ka mid ahi ay Carab ahaayeen afartaas Nabi oo kala ah, Huud Calayhi salaam, Saalax Calayhi salaam, Shucayb Calayhi Salaam iyo Nabi Maxamed Salalaahu Calayhi wasalam.
• Ma ogtahay in Nabi Suleymaan uu Ilaahay siiyay awood aanu siinin cid kale, waxaanu Nabigaas Ilaahay u sakhiray dabaysha, shayaadiintuna waxa ay ahaayeen qaar u adeega isaga.
• Ma ogtahay in 17ka October Somaliland looga aqoonsan yahay maalinta shuhadada, iyada oo ku beegan 17/October/I984.Maalintaas waxa Burco-Duuray ka dhacay dagaal aad u qadhaadh oo dhex maray SNM iyo Dawladii Maxamed Siyaad Barre, waxaana goobtaas ku geeriyooday tiradii u badnayd ee SNM ahayd ee meel ku wada geeriyoota, waxaana dadka maalintaas dhintay ku jirey Mujaahid Lixle.
• Ma ogtahay in dagaalkii Adwa uu ahaa meeshii koowaad ee Afrikaan u ku jabiyo reer Yurub.Sanadkaas oo ay taariikhdu ahayd 1896 Ethopia ayaa jabisay Talyaaniga oo rabay in uu qabsado dhulkeeda.
• Ma ogtahay in badda ama harada ugu dhanaanka badan harooyinka adduunka ka jiraa, ay tahay Dead Sea ama badda dhimatay taas oo ku taalla wadanka Jordan.
• Ma ogtahay in Somaliland ay tahay waddanka 131aad ee ugu dadka badan dalalka adduunka, oo ay ku noolyihiin3500 0000(Saddex Milyan iyo Shab Boqol oo kun) oo qof, isla markaasna ay ka dad badan tahay 133 wadan oo caalamka ka mid ah.
• Ma ogtahay in Jasiiradda ugu ballaadhan jasiiradaha adduunka ku yaallaa in ay tahay Jasiiradda Greenland, taas oo hoos timaada maamulka wadanka Holland.
Ma ogtahay in qofkii koowaad ee Afrikaanka ahaa ee ku guuleysta billad sharafeedka caalamiga ah ee nabadu, uu ahaa Baadarigii Koonfur Afrika ee Desmond Tutu, kaas oo billada ku helay ka soo horjeedsigiisii siyaasadii midab kala sooca ee South Africa ka jirtay.
Previous PostDiin-faafiye Saamayn Yeeshay!!! Next PostM/Siilaanyo Oo Beeshiisa Shir Uu Kala Qayb Galay Burco Kala Dardaarmay Inaanay Doorkan Han Madaxweyne Yeelan Ee Loo Daayo Musharaxiinta Kulmiye Ee Hankooda Iclaamiyay